७ बर्षपछि नागरिकता, विहारीसँग मधेशीको सम्बन्ध तोड्न : सांसद जितेन्द्र देव - Dainik Online Dainik Online
७ बर्षपछि नागरिकता, विहारीसँग मधेशीको सम्बन्ध तोड्न : सांसद जितेन्द्र देव
प्रकाशित मिति : ८ असार २०७७, सोमबार ९ : ५२
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानलाई मण्डले राष्ट्रवादी मानसिकताको संज्ञा दिनुभएको छ।
राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै देवले युपी र विहारसँग वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने मानसिकता मण्डले राष्ट्रवादी मानसिकता भएको बताउनुभएको हो।
नेकपाको अपरिपक्व निर्णयले मुलुकमा दंगा भड्किन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विहार र यूपीसँगको वैवाहिक सम्बन्ध तोडेर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने मानसिकता राख्ने ? यो मधेश विरोधी मानसिकता हो । यो मण्डले राष्ट्रवादी मानसिकता हो। यो प्रतिक्रान्तिकारी मानसिकता हो। आग्रह गर्छु यो विषयमा पुर्नविचारमा गर्नुहोस्। भोली नेकपा एकातिर कांग्रेस र मधेशवादी दलहरुलाई एकता भएर मुलुकलाई दुर्घटनामा लग्ने काम नगर्नुहोस्।’’
नेकपाको निर्णयले साम्रपदायिक द्वन्द जितेन्द्र नारायण र मुलुकलाई विभाजनतर्फ लैजाने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म दुबै छिमेकी मुलुसँग समदुरीको सिद्धान्त भएपनि भारतसँग विभिन्न कारणले विशेष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति चीनमुखी भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘फोरेन पोलिसी एकमुखे भयो । यो मुलुकर्लाइ एउटा छिमेकीतिर लैजादै हुनुहुन्छ । तपाईको पार्टी लागोस हामीलाई भन्नु केही छैन् । नेपाली कांग्रेसर्लाइ भन्नु केही छैन । ५० पटक मिटिङ गर्नुहोस चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग हामीलाई भन्नु केही छैन् । तर यो राष्ट्र चाँही समदुरीको सिद्धान्तमा जानुपर्छ दुबैसँग मित्रताको सम्बन्ध राख्नुपर्छ । सत्तारुढ पार्टीको कारणले वैदेशिक नीतिमाथि प्रहार हुँदैछ । अब हामी चिनियाँ क्याम्पमा गयौँ भन्ने म्यासेज गएको छ । के यो ठिक भइरहेको छ ? यसले मुलुको लोकतन्त्रर्ला बलियो गर्छ ? यसले आन्तरिक राष्ट्रवादलाई बलियो गर्छ?’’
युपी र विहारमा मधेशीको सम्बन्ध योजनाबद्ध ढंगले तोड्ने नेकपाको मानसिकता रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाल भारतको सम्बन्ध कुनै पार्टीले स्थापना गरेको नभइ यो सताब्दीदेखी संस्कृति र जनताले स्थापना गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भारतलाई कट गरेर चिनियाँ झोलामा नेपाललाई लैजाने नेकपाको निर्णयले भोली राजनीतिक दुर्घटना हुने र सँगै जेल जानुपर्ने अवस्था आउने बताउनुभयो ।
कम्युनिष्ट पार्टीले मुलुकमा आगो लगाएर सामन्तवादीहरुलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वीरगञ्जदेखि राजविराजसम्म जुलुस निस्केको छ । कांग्रेसजस्तो पार्टी, मधेशवादी दललाई यसरी हेप्ने? कांग्रेसलाई हेपेर मधेशी दललाई हेपेर यो मुलुकमा एक्लै सञ्चालन गर्न सम्भव छ त्यो? राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ यो मुलुकमा सहमति नतोड्नुहोस्।’’
आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको थियो । जसमा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले फरक मत राखेका थिए।